‘बनेपालाई प्राण दिनेलाई भोट दिनुस्’ – NamoBuddha Khabar
‘बनेपालाई प्राण दिनेलाई भोट दिनुस्’
मंगलबार, मंसिर १२, २०७४ | १५:४०:३३ |
लक्ष्मी नरसिंह बादे, मेयर, बनेपा
म पटक– पटक नाउँ लिन्न तर एकपटक चाँहि लिन्छु । म मेयरको उम्मेद्वार हुँदा यही चौर (लायकु मञ्च)मा उन्ले मलाई घुसिया र सामन्ती भनेछन् । म घुसिया रे, सामान्ती रे लौ भयो अब ? म पुलिसमा जागिर खाको मान्छे । ठानेदारदेखि एसएस्पीसम्म ३२ बर्ष जागिर खाको मान्छे । ३० बर्षसम्म जागिर खान पाउने हो तर राम्रो काम गरेवापत दुईबर्ष थप गरी ३२ बर्ष जागिर खाने अवसर पाउने मान्छे म । बनेपाका धेरै मान्छे मलाई भेट्न आउँथे, उनीहरुको काम गरेर उल्टै कफि खुवाएर पठाउथें । अरु पैसा लिन्छन् तर म उल्टो कफि खुवाएर पठाउँथे । म कसरी घुसिया ?
अब म उहाँको कुरा गर्छु है ? कसलाई भनेको हो भनेर आफैं बुझ्नुहोस् । म घुसिया हैन उहि घुसिया हो । कसरी घुसिया हो भने म प्रमाण दिन्छु । म नगरपालिकाको मेयर हुँदा अहिले पनि म आफ्नो प्राईभेट गाडीमा आफ्नै पैसाले तेल हाल्छु तर उनी सांसद र राज्य मन्त्रि हुँदा संसदवाट, मन्त्रालयबाट मात्र हैन बनेपा नगरपालिकाको तेल हालेर मनपरी गरे । सबै सुबिधा पाउँदा पनि नगरपालिकाको तेल हालेर मनपरी गर्ने उनी घुसिया कि म घुसिया ? तपाइँहरु भन्नुस् ।
अब उनी उद्योग बाणिज्य राज्य मन्त्री भए । के के न गर्लान् भनेको त बनेपामा भएको मायोज चाउचाउ कारखाना बन्द गरे, ल हेर विकास । ५ सय मजदुरको रोजी–रोटी खोसिए । त्यही हो उनको विकास ? अब म अर्को कुरा भनौ कि नभनौ । भनौ–भनौ पनि लाग्यो फेरि गलत मान्छेलाई भोट हाल्नु होला त्यसैले जानकारी दिनै पर्यो नि । उनी भाईमारा पनि रहेछन् । आफ्ना दाजुभाई दिदिबहिनीलाई सम्पति नदिइकन आफु मात्र लिएर मुद्दा बोक्या, बोक्यै गर्ने । जिल्लामा पुनरावेदन र सर्वोच्वमा मुद्दा बोक्या, बोक्यौ गर्ने आफ्नो दाजुभाईलाई सम्पती नदिने अनि भाईमारा भएन र ?
ए वावा म चाँहि सामन्ती रे कस्लाई मैले पेल्या छर अब उनी सामन्ती भन्ने कि म सामन्ती तपाईहरु बुझ्नुहोस् । तिन चार सय रोपनी जग्गा भएकालाई सामन्ती भन्ने कि म सामान्य मान्छेलाई सामन्ती भन्ने । मेरै अगाडी यही चौरमा पनि उनका मोही होलान् । त्यो मोहीहरुलाई मोहियानी हक दिए ? लौ भन्नुहोस् अब उनी सामन्ती कि म सामन्ती ? अब यस्ताले झुटा कुरा गरेर भड्काएर, लोभ्याएर भोट माग्न खोज्या छन् यसमा सतर्क हुनुस् है । यो कुरा सबैलाई भन्नुस् है, आफ्ना छिमेकीहरुलाई पनि भन्नुस् । यस्ताले जितेमा बिताउँछन् । कसरी हाम्रो जनताको सेवा गर्छन् ? पत्याउनु हुन्छ ? अब उनले अस्ति बनेपा महोत्सवमा मलाई १०० दिन पुगेर पनि एमालेले केही गर्न सकेन भनेछन् । म भन्छु उनले चार–चार बर्ष सांसद भए, राज्यमन्त्री भए, आखिर के गरे ? आफ्नो आङमा भैंसी नदेख्ने अर्काको आङमा जुम्रा नभएपनि कोट्टाएर हेर्न खोज्ने ?
हामी त व्यवस्थित विकास गर्दैछौ । बनेपा, धुलिखेल र पनौती तिनवटै नगरका मेयर मिलेर यहाँको करिडोर निर्माण गरी यहाँको यातायातको चापलाई कम गर्ने, मालवाहक ट्रकलाई तलैबाट पठाउने, तिनवटै नगरपालिका मिलेर फोहोर मैलाको व्यवस्थापना गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने । तिनवटै नगरपालिका मिलेर प्रदेशको राजधानी काभ्रे ल्याउने भनेर लागेका छौ । त्यसैले मेरो भनाई के हो भने यस्ताको बहकावमा लागेर हामीले कदापी भोट दिनु हुन्न ।
यहाँ प्रतिनिधिसभा २ को –ख) प्रदेशको सुर्य चिन्ह ध्वजावहाक उम्मेदवार बसुन्धरा हुमागाई छन् । उनी बनेपाली पानीले काकाकुल हुने देखर भुमेडाँडाको पानी खुवाउनुपर्छ भन्दै लाग्ने उहिल्यै देखिको मान्छे हुन् । उम्मेदवार हुँदा मात्र भनेका हैनन् कोलाँती भुमेडाँडाको गाविस अध्यक्ष भएदैखि नै हामीलाई प्राण दिनुपर्छ भन्ने मान्छे हुमागार्इं कामरेडनै हनु । यस्ता मान्छेलाई पो चिन्नुपर्छ त । बनेपाली नभएपनि हामीप्रति सच्चा समाजसेवी मन उनमा छ । यसरी बनेपाको विकास गर्ने व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस् ।
अर्को अनुहार, चिरपरिचित अनुहार । समग्र काभ्रेलीलाई माया गर्ने गोकुल बाँसकोटा कामरेड । समुन्नत काभ्रेको भिजन छ गोकुल कामरेडसंग, प्रतिनिधिसभा २ बाट उनलाई पनि जिताउनैपर्छ । २०७० सालको संविधानसभा चुनाउँमा हारेपनि बर्षौं हाम्रो सेवामा समर्पित गोकुल कामरेडसंग अहिलेचाँहि हार्ने डरले प्रदेशमा उम्मेद्वारी दिई डिमोसन भएकालाई बिश्वास गर्ने ठाउँ नै छैन है ।
त्यसैले म भन्छु बनेपाको हित चाहने उम्मेदवारलाई भोट दिनुस् । काम गर्ने कुर्सीमा पुगेर पनि निदाएर बस्नेलाई हैन । बनेपाली पानीले प्याक–प्याक भईरहँदा पनि निदाएर बस्नेलाई, मोहीलाई मोहीयानी हक समेत नदिनेलाई चोट, न्याय र समानताको अवाज उठाउनेलाई भोट । भ्रष्टाचार गर्न पल्कनेलाई हैन विकासका लागि कम्मर कस्नेलाई भोट दिनुस् । यही छ मेरा सम्पुर्ण बनेपालीहरुलाई तपाईहरुकै काकाको अनुरोध ।
(बनेपा लायकुमञ्चमा संयुक्त बाम गठबन्धनद्धारा आयोजित चुनावी कोणसभामा बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख लक्ष्मी नरसिंह वादेद्धारा गरिएको सम्बोधनको अंश ।)
प्रस्तुति : दिनेश घिमिरे